दुनियाँ – Page 107 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०५:१६ English
अमेरिकी दूतावासहरूमा सुरक्षा कडा ३० भाद्र २०६९, शनिबार १०:२७
धर्मगुरु बारेको फिल्म बिबाद चर्कंदै २९ भाद्र २०६९, शुक्रबार २२:१६
काठमाडौं, २९ भदौ । मुस्लिम धर्मगुरुबारे बनेको अमेरिकी फिल्म अपमानजनक भएको भन्दै सुरु भएको विरोध धेरै देशमा फैलिएको छ। यसै क्रममा लेबनानमा केएफसी रेस्टुरेन्टमा भएको आक्रमणमा शुक्रबार एक जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना घाइते भएका छन्। बताइएअनुसार तीन हजार प्रदर्शनकारीहरुका साथ..
अफगानिस्तानमा दुर्घटना : ५० भन्दा बढीको मृत्यु २९ भाद्र २०६९, शुक्रबार १५:१२
काठमाडौं, २९ भदौ । अफगानिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा यात्रुबाहक बस र तेल ट्याङकर एक आपसमा ठोक्किदा ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । गज्नी प्रान्त स्थित काबुल कान्धाहार रोडमा उत्त दुर्घटना भएको अन्र्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । दुर्घटना पछि दुबै गाडीमा आगलागि भएको बताईएको..
चीनका भावी राष्ट्रपति अचानक हराएकोमा आशंका २८ भाद्र २०६९, बिहीबार २०:४३
काठमाडौं, २८ भदौ । चीनका उपराष्ट्रपति शि जिनपिङ एक्कासी सार्वजनिक रुपमा देखा पर्न छोडेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । केही दिनयता कतिपय महत्वपूर्ण बैठकहरुमा उनी सहभागी नभएको र तय गरिसकिएका महत्वपूर्ण भेटघाटहरु समेत रद्द गरिएका छन् । यसले जिनपिङको विषयमा अनेक आशंका र अनुमान गरिएको..
चलचित्र निर्माण बिरोधमा प्रर्दशन २८ भाद्र २०६९, बिहीबार १९:०४
काठमाडौं, २८ भदौ । इस्लामिक धर्मको उपेक्षा हुने गरी अमेरीकामा चलचित्र निर्माण भएको भन्दै इजिप्टमा लगायतका इस्लामिक देशमा पनि प्रर्दशन जारी रहेको छ । प्रर्दशनका क्रममा प्रहरी संग झडप हुदा यमनमा ३० भन्दा बढी प्रर्दशनकारी घाईते भएका छन् । इजिप्टमा रहेको अमेरीकी दुतावास अघि..
लिबियामा अमेरीकी दुतावासमा आक्रमण २७ भाद्र २०६९, बुधबार १४:५३
काठमाडौं, २७ भदौ । लिबियाको पूर्वी शहर बेन्घाजी रहेको अमेरीकी दुतावासमा भएको आक्रमणमा परी एक अमेरीकी अधिकारीको ज्यान गएको छ । हतियार सहित आएको व्यक्तिले दुतावास रहेको भवनमा आक्रमण गर्दा अन्य एक अमेरीकी नागरीक घाईते अन्र्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । हतियार धारी मानिस..
भारतिय काटुर्नीष्ट असिम त्रिबेदी जमानतमा रिहा २७ भाद्र २०६९, बुधबार १४:४१
काठमाडौं, २७ भदौ । देशद्रोहको मुद्धा लगाउदै गत आईवार हिरासतमा लिइएका भारतिय काटुर्नीष्ट असिम त्रिबेदी जमानतमा रिहा भएका छन् । मङलबार मुम्बई हाईकोर्टले असिमलाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि आर्थर रोड जेलबाट आज उनी रिहा भएका हुन् । काटुर्नीष्ट असिम त्रिबेदी बिरुद्ध आफ्ना..
फ्याक्ट्रीमा आगलागी, एक सय भन्दा बढीको मृत्यु २७ भाद्र २०६९, बुधबार १३:३५
पाकिस्तान, २७ भदौ । पाकिस्तानको कराची स्थित एक गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा आगलागी हुदा एक सय भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । मङलबार साझ लागेको आगलागि अन्य कैयन व्यक्ति घाईते हुन पुगेका छन् । आगलागि पछि झ्याल फोडेर भाग्ने खोज्नेहरु समेत घाईते भएको बुझीएको छ । आगलागिका कारण बारे अनुसन्धान..
घर बस्ने श्रीमतीलाई श्रीमानबाट तलब २५ भाद्र २०६९, सोमबार १०:२१
काठमाडौं, २४ भदौ । आफ्नै श्रीमतीलाई श्रीमानले तलब दिने कुरा कति व्यवहारिक हुन सक्ला ? रोचक मात्रै होइन यो प्रश्न पेचिलो पनि छ । तर, अब भारतीय गृहिणीहरुले छिट्टै नै आफ्ना श्रीमानबाट मासिक तलब भने पाउने भएका छन्। घर बसेर घरायसी काम गर्ने श्रीमतीहरुलाई आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत..
“इशनिन्दा”को आरोप लागेकी किशोरी धरौटीमा रिहा २४ भाद्र २०६९, आईतवार ०७:२१
इस्लामावाद, २४ भदौ । पाकिस्तानमा इशनिन्दाको आरोपमा तीन साताअघि पक्राउ परेकी एक इशाइ किशोरीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ। १४ वर्षे ती किशोरीले कुरान जलाएको आरोप लगाउँदै एउटा भीडले कारवाहीको माग गरेपछि उनलाई इस्लामावादबाट पक्राउ गरिएको थियो । गिरफ्तार किशोरीलाई न्यायाधीश मुहम्मद..
ह्यारीको समर्थनमा फेसबुकमा नांगा तस्बीर अपलोड २३ भाद्र २०६९, शनिबार १२:१८
काठमाडौं, २३ भदौ । नाङ्गो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि विवादमा घेरिएका बेलायतका राजकुमार ह्यारीको पक्षमा बेलायतमा जनलहर उर्लिएको छ। उनको पक्षमा बेलायती सैनिकका पत्नी तथा प्रेमिकाहरुले फेसबुकमा आफ्ना नाङ्गा तस्बिर अपलोड गरेका छन्। यसरी ह्यारीको समर्थनमा नाङ्गो फोटो अपलोड गर्नेको..
चीनमा भूकम्प, ६५ को मृत्यु ७ सयभन्दा बढी घाइते २३ भाद्र २०६९, शनिबार १२:११
काठमाडौं, २३ भदौ । चीनको दक्षिण पश्चिङमी युनान र ग्विजाउ प्रान्तमा दुइपटक गरी गएको भूकम्पमा परी कम्तिमा ६५ जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार गएको ५.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी कम्तिमा ७ सय घाइते भएका छन्भने ७ लाख मानिसहरु प्रभावित भएको छ। भूकम्प प्रभावित कतिपय गाउँमा जाने बाटोसमेत..
उमेर नपुगी यौन सम्पर्क राखेपछि… २१ भाद्र २०६९, बिहीबार १७:१९
काठमाडौं, २१ भदौ । उमेर नपुग्दै यौन सम्पर्क गरेको भन्दै मालेको एक अदालतले १६ वर्षीया किशोरीलाई १० कोर्रा हान्ने फैसला सुनाएको छ। २९ वर्षीय युवकसँग झाडीमुनी यौन सम्पर्क गरिरहँदा फेला परेका थिए। किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भएपछि कोर्रा हान्न आदेश दिइएको हो। मालेको हुलहुद्दुफारु..
यौनवर्धक औषधिले लिंग क्षतिग्रस्त भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर २१ भाद्र २०६९, बिहीबार १०:२२
काठमाडौं, २१ भदौ । न्युयोर्क (अमेरिका)का एड्रियन कार्टर नामक व्यक्तिले ‘व्रिलिस प्रो’ नामको यौनोत्तेजक औषधी सेवनपछि गरेको यौन सम्पर्कका कारण आफ्नो लिंग क्षतिग्रस्त भएको दाबी गरेका छन् । कार्टरले उक्त औषधी उत्पादक कम्पनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनको दाबी अनुसार एक..
राजकुमार ह्यारीलाई अश्लील फिल्मको प्रस्ताव १९ भाद्र २०६९, मंगलवार १९:२९
काठमाडौं, १९ भदौ । ब्रिटेनका राजकुमार ह्यारीलाई अश्लील फिल्ममा काम गर्न कथित रुपमा एक करोड डलरको अफर गरिएको छ । टीएमजेड अनलाइन खबरले जनाएअनुसार ‘द ट्रवल विद ह्यारी’ नामक एक अश्लील फिल्ममा प्रमुख पात्रका रुपमा अभिनय गर्न प्रिन्स ह्यारीलाई त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । विविड..
‘उपचारका लागि’ विदेशिइन् सोनिया १९ भाद्र २०६९, मंगलवार १४:४२
काठमाडौं, १९ भदौ । भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता का रुपमा रहेकी भारतीय कङ्ग्रेसका अध्यक्ष सोनिया गान्धी उपचारका लागि विदेश गएकी छिन् । भारतका विपक्षी दलले कोइला मुद्दा उछालेर प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको राजिनामा माग गरिरहेको समयमा उनको विदेश यात्रालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको..